Soo degso Boeing C-32 Ciidamada Cirka Laba USAF FSX & P3D - Rikoooo
downloads 10 974
Model-ka TDS, VC waxaa qoray Alejandro Rojas Lucena iyo Ken Wiggington, oo ay dib u hagaajiyeen Candyman. Waxaa loo diyaariyey oo la isu keenay P3D & FSX waxaa qoray Chris Evans. Thanks gaar ah Chris Evans shaashadda
Boeing C-32 waa diyaarad militari oo ay leedahay USAF oo ka timid 757-200. Hadda waxay u adeegeysaa sida Air Force Two. (Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Wikipedia).
Cimilada Labaad waa calaamada loo yaqaan 'US Air Force' oo ay isticmaalaan madaxweyne kuxigeenka Mareykanka, haddii Madaxwaynaha Maraykanku uu sidoo kale ku jiro guddi kiisaska loo yaqaan 'Air Force One'.
Waxba lagama dhihi karo tan add-on oo tayo sare leh oo la jaan qaada (dadka kale) la Prepar3D v4, ogsoonow in qaansada loo yaqaan 'Virtipit' 'ay ka mid tahay tan' 737-800 (oo leh FMC iyo cabirro kale oo faa'iido leh) oo ku dhow Boeing C-32. Codadka (saxda ah) waxay ka yimaadeen Boeing 757 kaasoo C-32 uu yahay mid soosaara. Mahad gaar ah ayaa leh Chris Evans for screenshots iyo fikirka ah xirmada.
Qore: Model-ka TDS, VC waxaa qoray Alejandro Rojas Lucena iyo Ken Wiggington, oo ay dib u hagaajiyeen Candyman. Waxaa loo diyaariyey oo la isu keenay P3D & FSX waxaa qoray Chris Evans. Thanks gaar ah Chris Evans shaashadda